ရင်ခုန်စရာ အိုက်တင်မျိုးစုံဖြင့် ဆက်စီ ကျကျ လုပ်ပြလိုက်တဲ့ “နန်းမွေ့စံ” – Shwe Yoe
အခုလက်ရှိတင်ပေးလာတဲ့ နန်းမွေ့စံရဲ့ပုံလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်ရင်ကိုထိမှန်စေမှာအသေအချာပါပဲနော်။ မွေ့စံဟာ သူမရဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာခဲ့တာပါခင်ဗျ။ ကဲ…. ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ နန်းမွေ့စံကတော့ အခုလက်ရှိမှာဆိုရင် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအများအပြားရရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။
သူမဟာ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံရိပ်အလန်းတွေဟာလည်း ပုရိသတွေရဲ့ရင် ကိုအမှန်အကန် ဟတ်ထိစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမွေ့စံဟာ အခုဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်brandနဲ့ အင်္ကျီတွေထုတ်နေတာလည်းဖြစ်ပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်‌ ကိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
နန်းမွေ့စံရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံလေးနဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေဟာလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်း စားနေတာပါနော်။နန်းမွေ့စံဟာ မကြာသေးမီကလည်း သူမရဲ့အလန်းစားပုံလေးတွေကို social networkမှာမျှဝေပေးလာပြန်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။
အခုလက်ရွိတင်ပေးလာတဲ့ နန်းမြေ့စံရဲ့ပုံလေးတြေဟာဆိုရင္လည်း ပရိသတ်ရင္ကိုထိမွန်စေမွာအေသအခ်ာပါပဲနော်။ မြေ့စံဟာ သူမရဲ့ လွေသြးကြယ်နေတဲ့ပုံလေးတြေ တင်ပေးလာခဲ့တာပါခင္ဗ်။ ကဲ…. ပရိသတ်တြေအတြက်ျပန္လည္မ်ွဝေပးလိုက္ပါတယ်နော်။ နန်းမြေ့စံကေတာ့ အခုလက်ရွိမွာဆိုရင် ပရိတ်သတ်တြေရဲ့စိတ်ဝင္စားမှုအမ်ားအျပားရရွိနေတဲ့ အနုပညာရွင္တစ်ယောက္ပါ။
သူမဟာ အမိုက္စားခန္ဓာကိုယ်အခ်ိုးအစားကိုလည်း ပိုင္ဆိုင္ထားတျာဖစ်ပြီး သူမရဲ့ဆြဲဆောင္မှုရွိတဲ့ပုံရိပ်အလန်းတြေဟာလည်း ပုရိသေတြရဲ့ရင် ကိုအမွန်အကန် ဟတ္ထိစေတာလည်ျးဖစ္ပါတယ်။ နန်းမြေ့စံဟာ အခုဆိုရင် ကိုယ္ပိုင်brandနဲ့ အက်င်္ီတြေထုတ်နေတာလည်ျးဖစ်ပြီး အနုပညာလှုပ်ရွားမှုတြေကိုဆက္တိုက္ဆိုသလို လုပ်‌ ကိုင်နေတာတြေ့ရပါတယ်။
နန်းမြေ့စံရဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ပုံစံလေးနဲ့ အလန်းစားဖက်ရွင္ဒီဇိုင်းတြေဟာလည်း ပရိသတ်တြေကြားမွာ ရေပန်း စားနေတာပါနော်။နန်းမြေ့စံဟာ မကြာသေးမီကလည်း သူမရဲ့အလန်းစားပုံလေးတြေကို social networkမွာမွေ်ဝေပးလျာပန္ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးအတြက်ျပန္လည္မ်ွဝေလိုက္ပါတယ်နော်။
ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစား ခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အမိုက် စား TIK TOK ဗီဒီယို